Biography kaLevi Durov
Intsapho kaLevi Durov yintlanga yabenzi beesksi. Yingakho i-biographie ye-Leo yayingenakuhluke ngokupheleleyo. Kodwa, mhlawumbi, i-biography yeDurov iye yaphuhliswa ngale ndlela, kuba abazali bakhe babengasebenzi kwiisksi. I-biography kaVev Durov ithi abazali bakhe "baxhamla" kunye nomqhagamshelwano wesayensi. Okokuthi, uyise nomama babefanele baqhube nemicimbi yempi, kungekhona ngeesksi.
Kwi-biography kaVev Durov kubonakala ukuba intsapho yakhe inzala enkulu kakhulu. Iokhokho zeNgonyama zikhonza umbuso ukususela ngekhulu leshumi elinesixhenxe. Intsapho yaseDurov yindlalifa eyayizifa, eyayisondelene nabantu abaninzi. Kodwa, njengokuba sibona, kuLevi, akukho nkonzo yemikhosi okanye iesksi. Ukususela ebuntwaneni, uDurov wathandwa kwi-art.
I-biographie yomdlali weqonga waqala kwingingqi yaseMoscow yaseLefortovo. Umdlali wekamva wayekhulile njengenkwenkwezi. Ubomi bakhe buchaza ukuba iNduna encinci iyakwazi ukuthatha inxaxheba kuzo zonke iimpi nokulwa. Wayexoshwa ngezihlandlo eziliqela esikolweni, kodwa oku akuzange kuthintele umlingani womntu. Ubaba akazange amgxeke uDurov ngenxa yento ayenzayo. Wayesethulisa. Kwaye uLeo le yesohlwayo esibi kakhulu. Wayeqonda ukuba wayehlazisa uyise phambi kwabanye, akhathazekile, kodwa, ixesha elikhoyo, akazange atshintshe.
Imfazwe ibanjwe uDurov eMoscow. Intsapho yakhe, kwaye wayenabo odade ababini: owokuqala kunye nomncinci, wahlala kwikhulu. Loo mntu wayehlala, njengabantwana abaninzi belo xesha - aphelise iibhobho-izibane, wagijima kunye namakhwenkwe. Kodwa, ngelo xesha, wayesele eselumlutha kwiholo. U-Leo wathatha inxaxheba kwimidlalo yamatrice kwaye wenza kwizibhedlele phambi kwamajoni alimele. Wayekwazi ukunyamezela abagulayo. Umfana wahlabelela waza wathinta kwaye wathinta ubuso obuhlukahlukeneyo. Ngaloo ndlela, abaphulaphuli bamthanda, yaye uLobert wagqiba ukuba wayefuna ukuba ngumdlali wezinto zokuzisa abantu kunye nolunye uvakalelo.
Xa uDurov efunda esikolweni, waya kwi-studio ye-drama, eyayisebenza kwiNdlu yamaPhayona. Emva kokugqiba esikolweni esiphakamileyo uLowe wangena eSikolo-Studio se-Art Art Theater. Le ndoda yayingena kuzo zonke iindwendwe kwaye, ngenxa yoko, yaba ngumnye wabafundi abathandekayo ootitshala. Kwaye, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngelo xesha imitha yangempela yafundiswa kwi-Art Art Theatre yaseMoscow. Akulungele ukufumana intlonelo, kodwa kwakukho nto into yokufunda.
Emva kokuphela kwe-Moscow Art Theater, uDurov waphela kwi-Central Children's Theater. Kwakukho apho waqhelana nomlawuli we-Efros, owayenako ukutshintsha i-future of many actors of that time. UDurov wadlala indima eyahlukileyo. Abanye babeselula kakhulu kwaye bengabantwana, kwaye abanye bafuna izakhono eziphezulu kunye nezakhono. Enyanisweni, uDurov wabhekana nayo yonke imisebenzi eyabelwe yona kwaye wafumana uvuyo olukhulu kwimidlalo awayeyidlala kuyo.
Ngo-1963, uEfros wathuthela eLenin Komsomol Theater. Ekubeni uDurov wayengomnye wabadlali abathandayo, umlawuli wamthabatha naye. Kanye kunye noDurov, abanye abadlali abanamakhono abanamathenda baye bajoyina inkundla. Singaxelela ukuba uDurov wayesebenza kunye no-Efros kwaye wafuduka esuka kwidlateralitha waya kwindawo yokudlala. Ngokomzekelo, ngowama-1969 umlawuli wanikezelwa ukuya kwindawo yokudlala yaseMalaya Bronnaya. Ekunye kunye naye, abaculi abalishumi kunye noDurov bangashiya, kunjalo. Ngaba phakathi kwabo. Kule midlalo i-Lev Durov isebenza nanamhla. Wadlala indima kwimisebenzi eyahlukeneyo. Phakathi kwabo kwakudlala ngokusekelwe kwimidlalo kaGogol, uChekhov, uShakespeare, kunye nabanye abalobi abanamakhono abaninzi. U-Efros wayesoloko ebona italenta kunye nekhono likaDurov. Ngoko ke, wamnika iindima apho iNdumbana yayingayibonakalisa ngokugcwele konke okusemandleni akhe. Ababukeli babehlala bevuyiswa ngendlela abanobuchule ngayo uDurov ephindaphindiweyo kubalinganiswa bakhe. I talente ye-Innate kunye nootitshala abalungileyo beloko bamnceda kule nto. Kunyaka ngamnye, umdlalo weDurov uphucule ngakumbi nangakumbi, nangona, nangaphambili kwiminyaka, kunokubizwa ngokuba yinto ecacileyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uDurov akayena nje umdlali obalaseleyo, kodwa naye umlawuli. Ngesinye isikhathi waphumelela kwisiGqeba esiLawulayo esiphezulu kwaye yena waqala ukuqhuba iintlobo ezahlukahlukeneyo ezihlala zifumana impumelelo enkulu kubaphulaphuli. Phakathi kwabo kukho imidlalo yeklasi, imisebenzi yabalobi banamhlanje, kunye neemculo. Ngomsebenzi wakhe ngamnye uDurov uyakwazi ukufumana nokubonisa ukugqwesa. Kukulungele ukuthabatha abadlali kwaye uqinisekise ukuba abaphulaphuli bakholelwa kwinto eyenzekayo kwisigaba. Lo mntu ngokwenene unetalente kuThixo.
Ukongezelela, u-Lev Durov, okwenene, naye ungumdlali omkhulu wefilimu. Waqala ukufowundela ukususela ngo-1954, kwaye emva kwefilimu "iintsuku ezithoba zonyaka omnye" yaba ngabaphulaphuli abaziwayo. Kubantu bakhe, u-Leo usoloko ebonisa ukuzenzeka, ubumnene, into ekhethekileyo, eyenze ibe yinto eqaqambileyo, ekhunjulwayo kunye nento encinci. Kubantu baseDurov kubakho ukukhanya okuqhaqhaqhazayo, ukuzonwabisa kunye nokukhohlisa. Zonke ezi mpawu zivela kwi-actor ngokwakhe. Nangoku, nangona ubudala, uhlala evuya kwaye evuya. Iingonyama uDurov zithandwa kwindawo yaseSoviet kwaye ziqhubeka zikhonza kwi-post-Soviet. Uqhubeka edlala kwiifilimi ezijonge abantu abancinci kunye nabo, njengabazali babo kunye nogogo kunye noomakhulu, bahloniphekile kwaye bahloniphekile ngenxa yendoda endala kwaye ingenangqondo, esoloko iliso elibi emehlweni akhe. Mhlawumbi, kungenxa yoko uDurov usengumdlali onqabileyo kakhulu, owamenywa ukuba athabathe kwiifilimi ezininzi.
ULevi Durov uyindoda engazange ibe yinto egciniweyo kunye nomhlophe. Ukuba ngumncinci, wayenokwenza imithi yokubumba kwaye wenza ifenitshala yakhe ngefenitshala eyahlukileyo. Umkakhe, u-Irina Kirichenko, wayenethamsanqa enjalo ngendoda. Inyaniso kukuba uLowe wayesazi indlela yokwenza wonke umsebenzi wesilisa ejikeleze indlu, kodwa, ukuba kuyimfuneko, unokupheka nokucoca. UDurov unentombi, uCatherine, owaba ngumdlali we-actress, njengabazali bakhe, kunye nabazukulu ababini: uKatyya noVanya. Ngoko sitsho ukuba ubomi balo mntu buyimpumelelo. Mhlawumbi, kwenzeka kuba wayengesabi nto kwaye wayehlala ehamba phambili. I-Durov iyinqaba elomeleleyo lamandla, apho, njengathi sonke sithemba, siya kubavuyisa ababukeli bayo ngaphezu konyaka omnye kunye nokubonakala kwesikrini kwiindima eziqaqambileyo nezingenakukhunjulwa.
UVera Brezhnev, ubomi bomntu
U-Adriano Celentano: I-Biography
Umdumi owaziwayo uVyacheslav Bronnikov
Clive Staples Lewis, i-biography
USiena Miller, umlingisi weNgesi
Uprokhor Chaliapin wasinda kwiintsapho zakhe eMaldives, umfanekiso
IHoroscope yeentlanzi-Abasetyhini ngoFebruwari 2017
Ngaba kufuneka ukholelwe imimangaliso?
Ungajonga njani ukuba umntu ulungele ukuqala intsapho?
Indlela yokuhlobisa indlu ngonyaka weNyoka
Ukutya ukuqinisa amazinyo
Yintoni enokuyenza kwaye ayikwazi ukwenza umfazi onesondo ngomlomo
Ungayomeleza njani izipikili zakho ngeveki ekhaya?
Kuchaneka njani ukuba uqhelane nesayithi kunye namadoda?
I-Cosmetics - i-beauty salon ekhaya
Izifo kumntwana njengendlela yokwenza umdla
Isibikezelo seenkwenkwezi ngeengcongolo ngo-2010
Ukususela kuma-60 ukuya kuma-80: iindlela zokwenziwa kwentwasahlobo
Isaladi kunye ne-rucola kunye ne-avocado
I-anti-cellulite entsha inamathela kwi-GUAM